Adding help file in project - MYSTERY ZILLION
Adding help file in project
project များတွင် user manual ရေးပြီး အသုံးပြုသူများ လွယ်ကူစေရန်
help များ ကိုထည့်ပေးလေ့ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဲ help များကို ဘယ်လိုပုံစံရေးပြီး add ကတာလဲ သိချင်ပါတယ် ရှင့်။
အခုလောလော ဆယ်တော့ asp.Net web application မှာ add ချင်ပါသည်။
You might want to do something similar to Wikipedia. E.g. You can use Pmwiki. It is free and easy to setup.